Manana ireo zava-dehibe 5 ireo ve ny tantaran'ny orinasanao?
Alatsinainy, Septambra 22, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tiako ny endrika, fa mpamorona mahatsiravina aho. Tiako ny fampandrosoana, saingy izaho no tena hack. Ary manoratra isan'andro aho Martech Zone ary nanoratra ny Corporate Blogging For Dummies aho, saingy tsy manasokajy ny tenako ho mpanoratra. Saingy fantatro ny endrika tsara, voan'ny fivoaran'ny fampandrosoana aho ary tiako ny manoratra. Vao avy nanangana tranokala vaovao izahay DK New Media, ka ity torohevitra avy amin'ny Thinkshift ity dia tonga lafatra